Malaysia njem nleta njem nleta nleta Malaysia Afọ 2020
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Malaysia njem nleta njem nleta nleta Malaysia Afọ 2020
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • investments • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
nke Mario Masciullo, pụrụ iche na eTN
Mịnịsta Ala nke Malaysia, YAB Tun Mahathir Mohamad, kwupụtara akara ngosi nke eze Gaa na mkpọsa Malaysia 2020 na July 22, 2019, na Kuala Lumpur International Airport.
Akara ngosi mkpọsa a gosipụtara akara ngosi dị iche iche nke Malaysia dịka hornbill, bunga raya (hibiscus), fern ọhịa, na agba nke ọkọlọtọ Malaysia.
Ha niile na - anọchite anya ọdịbendị, ọdịbendị, na ahịhịa na anụmanụ nke Malaysia, yana ahụmịhe enyere dị ka ebe ezumike.
Edeputara 2020 dika Gaa na Malaysia 2020 na ebumnuche nke iru nde mmadụ iri atọ na-abata na njem nleta na ijeri 30.
Ebumnuche nke mkpọsa a bụ ecotourism, art, na omenala. Iji hụ na ihe ịga nke ọma nke mkpọsa ahụ, Tourism Malaysia rụkọtara ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọrụ nzuzo dị iche iche dịka Sharp (M) Electronics Sdn. Bhd., Malaysia Airlines, AirAsia, Firefly, Malin-do Air, na Malaysia Airports Holdings Berhad iji mejuputa ọrụ ahịa na nkwado site na iji nyiwe mgbasa ozi mpaghara na nke ụwa.